Shabakada bulshada – Android – Vessoft
Ask.fm – softiweer si loo maareeyo adeegga caanka ah ee su’aalaha iyo jawaabaha. Software-ka ayaa la macaamilaya shabakadaha kale ee bulshada caan ka ah.
Software in la abuuro oo u arkaan video gaaban ee shabakadaha bulshada. Software ayaa awood u nalugu kanaalada video kala duwan, quudintooda warka u arkaan iyo ka tago comments in ay videos.
9GAG – qalab ku habboon oo lagu daawado waxa ku jira adeegga madaddaalada caanka ah 9GAG. Software-ka wuxuu awood u siinayaa inuu la wadaago waxyaabaha xiisaha leh asxaabta, qiimeeyo oo ka tago faallooyinka.